Amanzi amaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2: izinhlobo nemithetho yokusebenzisa > Ukudla ngesifo sikashukela
Kungenzeka yini ukuphuza amanzi amaminerali ngoshukela ophezulu
Ukwelashwa kwe-spa sikashukela ngokusetshenziswa kwamanzi amaminerali kunomlando omude. Imininingwane yokuqala mayelana nalokhu isukela ekuqaleni kwekhulu le-19. Amanzi amaminerali awasizanga ukuqinisa isimo se-glycemic kuphela, kodwa futhi anciphisa kakhulu izimpawu zokuphazamiseka kwesifo sikashukela, ukuvimbela ukukhula kwawo. Amanzi amaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2 anganciphisa okuqukethwe kwe-glucose egazini nomchamo, athuthukise isimo ku-angio yesifo sikashukela ne-neuropathy. Uhlobo oluyilo lwamaminerali amanzi nemodi yokusetshenziswa kwayo ibalulekile empumelelweni yokwelashwa.
Izici zokusetshenziswa kwamanzi amaminerali kushukela
Amanzi amaminerali ayaziswa ngosawoti wawo oncibilikisiwe, izinto zokulandela umkhondo nezinto eziqukethe izinto eziphilayo. Amanzi angaba yi-glandular, i-magnesium, iodide, i-bromide, aqukethe ezinye izinto ezithile. Ukuhlukaniswa okwamukelwa kabanzi kuhlukanisa amanzi amaminerali nge-sodium, i-bicarbonate ne-chloride. Phakathi kwabo, udokotela angakhetha izinketho ezifanele kakhulu zesifo sikashukela - i-sodium bicarbonate, i-calcium chloride, i-bicarbonate nabanye, ngokuya ngomsebenzi wokwelapha.
Izinzuzo zamanzi ahlukahlukene wamaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2
I-Chloride Gqugquzela ukukhiqizwa kwama-enzyme wokugaya, kufaka phakathi i-insulin
IHydrocarbonate Yenza umsebenzi we-insulin ube ngokwejwayelekile, wenze kusebenze ama-enzymes athuthukisa ukungena kweglucose kumaseli
I-Sulphate Thuthukisa ukusebenza kwesibindi, isiza ukulawula ukwakheka kweglucose futhi yehlise izinga layo legazi
Ngenxa yokusetshenziswa kwamanzi amaminerali kwesifo sikashukela sohlobo 2, imiphumela elandelayo ingatholakala:
ukunciphisa i-glucosuria noshukela wegazi ophansi,
yenza kusebenze ama-enzymes asiza ukungena kwe-glucose ukungena kumaseli,
ukwenza ngcono ukwakheka kwe-lipid ye-serum yegazi ngokunciphisa okuqukethwe kwe-cholesterol embi,
khulisa ukuzwela kwama-cell receptors ku-insulin,
thuthukisa izinqubo ze-metabolic kwezicubu ukuze zithole inani elanele lamandla.
Umphumela ophikelela kakhulu futhi ohlala njalo wokwelashwa ngamanzi amaminerali ungatholakala ngokuhlanganiswa kokungenisa kwabo kanye ne-balneotherapy. Izithambisi zamanzi amaminerali zinciphisa kakhulu ukubonakaliswa kwezinkinga zesifo sikashukela sezinzwa nezenhliziyo, sithuthukise i-carbohydrate metabolism futhi sibe nomthelela kulungiswa kwamafutha omzimba ngokweqile. Amanzi amaminerali akhethwe kahle ngohlobo 2 sikashukela anganciphisa kakhulu isidingo semithi ye-insulin neyokwehlisa ushukela.
Amanzi e-Chloride Amaminerali ama-Diabetesics
Amanzi amaminerali aqukethe i-chlorine anions asheshisa izinqubo ze-metabolic emzimbeni, athuthukisa ukusebenza kwesibindi, athinta ukukhiqizwa kwe-cholesterol enempilo kuwo, futhi alawule ukuwohloka kwe-glycogen ku-glucose. Amanzi e-Chloride avame ukuba ne-calcium, ehlisa ukopha. Lokhu kubalulekile kuma-angiopathies ashukela. I-Magnesium iyadingeka ekuphenduleni kwe-metabolic, kepha kuma-diabetesics kunokuqothulwa okusheshayo kwale mineral emzimbeni.
Izinhlobo zamanzi amaminerali e-chloride
Buka Zuza Isihloko
I-Sodium Chloride Isebenza ukwakheka kwe-enzyme, ithuthukisa ukugcinwa kwe-insulin Mirgorod, Kuyalnik, Nartan, Minsk, Talitskaya
I-Sodium Chloride-Bicarbonate Kwandisa ukuvela kwe-Insulin Receptor Essentuki
ICalcium chloride Inomphumela wokulwa nokuvuvukala, uvimbela ukuthuthukiswa kwamathambo kushukela Lugela
Isici esiyinhloko samaminerali wamanzi ane-chloride base ukuthi sithinta ukusebenzisana kwe-insulin neglucagon. Baphinde balawule nekhono lamaseli we-beta ukukhiqiza i-insulin futhi andise indawo yabo yokusebenza. Ngasikhathi sinye, zithuthukisa ukwanda kwezicubu ukungena kwe-insulin, kusebenze ubudlelwano phakathi kwezinzwa, ama-endocrine, amasistimu wokugaya ukudla ukuze kube ngokomsebenzi ukusebenza kwamanyikwe.
Amanzi e-Chloride ngokuvamile anconywa ukuthi aphuzwe afudumele imizuzu eyi-10-15 ngaphambi kokudla kathathu ngosuku. Le modi ingenxa yomsebenzi wezinhlayiya ze-chlorine ukukhuthaza ukucashuka endaweni yokugaya ukudla. Uma uphuza amanzi ngezingcezu ezincane futhi kancane, uzongena emlonyeni, bese kuba esiswini, kuvuse umsebenzi wokufihla izindlala ukukhiqiza ama-enzymes namahomoni. Isifundo siqala ngengxenye yesithathu yengilazi, kancane kancane silethe kuze kube yi-200 ml yokwamukela ngakunye, isikhathi sesifundo sinqunywa ngudokotela.
Izinzuzo zamanzi e-bicarbonate kashukela
Amanzi we-Hydrocarbonate (alkaline) enza cishe ingxenye yesithathu yamanzi amaminerali aziwayo futhi avame ukusetshenziswa ekwelapheni izifo ezahlukahlukene. Kuzo ungangeza futhi amaminerali amaningi abalulekile - i-magnesium, i-calcium, i-chlorine, i-iron. Ukudla njalo amanzi e-bicarbonate kukuvumela ukuthi ulinganise ibhalansi ye-electrolyte yegazi, okhubazekile kushukela.
Izinga le-pH lejusi le-pancreatic liyiyunithi engama-8,8. Uma imikhiqizo eminingi ye-oxidation iqoqana emzimbeni (ngokwesibonelo, ngenxa yomsebenzi wama-radical wamahhala, ukungondleki, ukuphazamiseka kwezinqubo ze-redox zohlobo 2 sikashukela), ama-pancreas aqala ukungabi nezinto ze-alkaline. Ngemuva kwakho konke, bachitha ekuthengeni kokungcola kwe-acid. Ukuntuleka kwama-ion we-alkaline, ikakhulukazi i-calcium, kunciphisa ukukhiqizwa kwe-insulin. Ngenxa yalokhu, ushukela ongafakwa egazini unqwabelana egazini, kuphakama i-glycosylated hemoglobin, bese kuba nezinkinga zesifo sikashukela. Ukubamba kwamanzi amaminerali we-hydrocarbonate wamaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2 kukuvumela ukuba ungathathi hlangothi ukunqwabelana kwemikhiqizo ye-acidic, uthuthukise ukukhiqizwa kwe-insulin, futhi wehlise noshukela wegazi. Amanzi anjalo anomthelela we-antioxidant, ukuvikela ekubhujisweni kwamaseli we-pancreatic beta.
Amanzi e-sodium bicarbonate ILuzhanskaya, Svalyava, Polyana Kvasova, Nabeglavi, Borjomi
Amanzi we-Hydrocarbonate-calcium-magnesium U-Arshan, Selinda, Elbrus, Polyana Narzanov
Amanzi we-Hydrocarbonate-calcium-sodium UBagatiati, Amur, Vazhas Tsharo
Phuza amanzi e-bicarbonate okungenani imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla. Udokotela angakunikeza irejimeni ihora nesigamu ngaphambi kokudla, kuya ngenhloso yokwelashwa. Phuza amanzi afudumele mayelana ne-150 ml ngesikhathi ngokunensa nangezikhathi ezinkulu.
Amanzi amaminerali we-Sulphate nokusetshenziswa kwawo kushukela
Amanzi wamaminerali we-Sulphate aqukethe usawoti we-sulfate. Lokhu kuvame ukuhlanganiswa ngensimbi noma ngethusi, yize amanye amaminerali nawo engahlanganiswa. Leli yiqembu elincane lamanzi, phakathi laziwa njenge- “Bukovinskaya”, “Ivanovskaya”, “Shaambary”.
Isici saleli qembu lamanzi amaminerali, uma sisetshenziselwa uhlobo 2 lwesifo sikashukela, ukuvusa ukukhululeka kwe-bile. I-cholesterol ethe xaxa idonswa kanye ne-bile, futhi lokhu kuvimbela ubungozi bokuthola isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Amanzi amaminerali afinyeziwe athuthukisa i-lipid metabolism, athuthukisa umsebenzi wama-enzymes athinta ukungena kwe-glucose kumaseli, asebenze izinqubo ze-metabolic futhi abambe iqhaza ekujuleni kwesisindo ngokweqile. Lolu hlobo lwamanzi amaminerali lungaqukatha ezinye izinto, ngenxa yokuthi ububanzi bezinkomba zezinjongo zabo bunwetshelwa kakhulu:
i-bicarbonate-sulfate - gqugquzela umsoco we-carbohydrate, wehlise ushukela egazini nomchamo,
i-magnesium sulfate - zivimbela i-hyperglycemia ngenxa yokuthi ibambezelekile emathunjini ukuze ifakwe isikhathi eside,
calcium sulfate - yenza ngcono ukusebenza kwamaseli we-beta ekukhiqizeni i-insulin,
i-sulfate-chloride - vuselela umsebenzi oyimfihlo wamanyikwe.
Indlela yokuphuza amanzi e-sulfate ngokuyinhloko ayinciki nje enkambweni yesifo sikashukela, kodwa nasezifo ezihlangene. Uma umsebenzi wokugcina imfihlo wesisu ukhuphukile - baphuza amanzi ihora nesigamu ngaphambi kokudla. Uma kwehliswa - uhhafu wehora ngaphambi kokudla. Ngesisu esinempilo, kunconywa amanzi e-sulfate imizuzu engama-45 ngaphambi kokudla. Qala isifundo ngenkomishi engu-1/3 kathathu ngosuku, kancane kancane ulethe inani libe ngu-200 ml, bese uqhubeka inyanga. Ngokwesincomo sikadokotela, ngemuva kwezinyanga ezi-3, ukuthathwa kwamanzi amaminerali kungaphindwa.
Ngemininingwane engaphezulu ngohlobo nangezindlela zokusebenzisa amanzi amaminerali ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, bheka ividiyo engezansi.
Ukudla ngoshukela ophezulu wegazi
1 Izimiso zokudla ushukela wegazi ophezulu
2 Izincomo ezijwayelekile
3 Yini okungafanele kudliwe nokuthi yini okungenziwa
3.1 Imifino enoshukela omningi
3.2 Izithelo namajikijolo
3.3 Inyama nenhlanzi
3.4 Ubisi noshukela wegazi
3.5 Izinhlamvu noshukela ophezulu
3.6 Izifundo zokuqala
3.7 Okunye ukudla
4 Imenyu eyisampula
5 Ungasebenziseka Ungadliwa
5.1 I-curd casserole
5.2 Berry Jelly
5.3 Isaladi Olivier
Ukudla okuningana noshukela wegazi ophezulu kuyimfuneko yokwenza isimo somzimba sibe ngokwejwayelekile. Uma isiguli singafuni ukuphuza umuthi ngokuzayo, kuyodingeka udle kahle futhi uvivinye umzimba njalo. Izinhlobonhlobo zokupheka zezitsha ezine-GI ephansi zenza kube lula ukuzivumelanisa nokudla okusha.
Imigomo Yokudla Ushukela Ophezulu Wegazi
Izinga likashukela wegazi ngu-5.5 mmol / L. Lesi yisimo sokwehla kwesifo sikashukela. Kwandisa amathuba, kepha akusiyona inkomba engu-100% yokuthuthukiswa kwesifo sikashukela. Kwabanjalo, kuyanconywa inombolo yethebula 9
Amanani kashukela egazi akhuphuka ngenxa yokungalingani kwe-insulin. Esimweni se-prediabetesic, amanyikwe awakwazi ukusebenza ngokwejwayelekile ama-hormone. Kwesinye isikhathi kuvela izimo ze-pathological lapho i-insulin ingangenwa khona ngamangqamuzana, okuholela ekuqongeleleni ushukela egazini. Ngamazinga kashukela aphezulu, ukusebenza ngokomzimba nosizo olufanele lokudla. Imigomo yokudla:
Ukudla izakhamzimba. Umkhawulo wekhalori ukuya ku-1500-1800 kcal.
Isisekelo sokondleka kwama-carbohydrate ayinkimbinkimbi, amaprotheni wemifino nezilwane, imifino nezithelo.
Ukudla - okuphathekayo: izikhathi ezi-5-6 ngosuku, izingxenye ezincane.
Khetha ukudla kunokuqukethwe kwekhalori okuncishisiwe, lawula inkomba ye-glycemic.
Ama-carbohydrate alula awafakwa kwimenyu.
Ukudla okwehlisa ushukela wegazi kwenzelwe isiguli ngasinye. Isimo esijwayelekile, umsebenzi owenziwe ngokomzimba, indlela yokuphila, ukudla okwenziwa emzimbeni kuyabhekwa. Ukushintshela ohlotsheni olusha kufanele kufinyeleleke futhi kuthokomele esigulini. Izincomo zabashukela kanye neziguli ezinoshukela omningi:
Ngoshukela okhuphukile, kubalulekile ukugcina isilinganiso samaprotheni, amafutha kanye ne-carbohydrate.
Gcina ukulingana kwamafutha, amaprotheni nama-carbohydrate. Okuqukethwe okulinganiswayo: Amaprotheni - 15-25%, lipids - 30-35%, ama-carbohydrate - 45-60%. Inani lamakhalori anqunywa udokotela.
Yidla ngasikhathi sinye.
Kuyelulekwa ukuthi udle imifino emisha - amavithamini asuswa ngesikhathi sokupheka.
Khetha imodi yokupheka emnene - gwema ukuthosa, upheke, ubhake, ubheke.
Phuza okungenani amalitha ayi-1.5 amanzi.
Khipha utshwala nokubhema.
Nikeza ukukhetha kokudla okune-fiber eningi.
Ungakudli ukudla amahora ama-2 ngaphambi kokulala.
Inani lama-carbohydrate abalwa ngokubheka ukusebenza ngokomzimba.
Ukudla kowesifazane okhulelwe noshukela ophezulu wegazi kususelwa kwimigomo efanayo. Ukudla kufanele kube kunciphile, izinongo ezinamandla azamukeleki. Kungcono ukuthi njalo uthathe izilinganiso zoshukela wegazi ngesikhathi sokukhulelwa, futhi ngokwanda okuthe xaxa, bonana nodokotela. Ngaphambi kokulala, ungaphuzi ubisi futhi udle izithelo. Kwabesifazane abakhulelwe, lokhu kudla kugcwele nge-veal ebilisiwe, ushizi omhlophe, amakhambi nemifino emisha. Uma ufuna amaswidi, kukhona amakhukhi ama-biscuit. Ungazihluza wena nejelly yengane kusuka kumajikijolo amasha noma aqandisiwe.
Imifino enoshukela ephezulu
Kunconywa ukunciphisa umkhawulo wokusetshenziswa kwemifino ngenkomba ephezulu ye-glycemic - amazambane, ama-beet. Nika imifino emisha, ebilisiwe noma ebhakiwe. Ngaphambi kokuhlanganisa imenyu isonto lonke, hlola inkomba ye-glycemic. Ithebula le-GI likumithombo evulekile. Ngaphandle kwemikhawulo, ungadla imifino elandelayo:
Izitsha zethanga ziphilile futhi zimnandi nge-GI ephansi.
Kungcono ukukhetha izinhlobo ezingafakwanga. Ukuguqula indlela odla ngayo ngoshukela omkhulu wegazi, ungalungisa iziphuzo eziqabulayo - i-lemonade, i-compote, isiphuzo sezithelo. Ukuvinjelwa kufakwa kubhanana, omisiwe, amagilebhisi, amakhabe, amakhiwane. Izinsuku zikhishwe ngokuphelele - i-GI yazo ingamayunithi angama-109. Kuvunyelwe:
Izithelo eziningi ze-citrus: i-orange, i-mandarin, ulamula, i-grapefruit.
Izithelo ezijwayelekile: ama-apula, amapharele, amaplamu, amapetshisi, umpe.
Amajikijolo engadi nawasehlathini: ama-sitrobheli, ama-raspberries, ama-currants amnyama abomvu, ama-blueberries, ama-blueberries, ama-cranberries, ama-cherries, ama-cherries.
Izithelo ezinhle nezichichima zinamakhalori amaningi, ngakho-ke kungcono ukuzinikela.
Ngoshukela wegazi ophakeme, inyama ebilisiwe iyanconywa:
Inyama kufanele ibe mananxa, kufanelekile: inyama yenkomo, inkukhu, unogwaja.
Lapho upheka, kususwa amanoni amaningi, isikhumba sikhishwe enyameni. Ungafaka ukudla ekudleni okuphuma phambili: isibindi, ulimi, izinkukhu zenkukhu. Inyama Evinjelwe:
ingulube enamafutha nenyama yenkomo,
amasoseji, amasoseji, umvimba ophekiwe futhi obhemayo.
Ukwehlisa ushukela, ukudla kwasolwandle nezinhlanzi ezinamafutha aphansi kuyanezelwa ekudleni: i-cod, i-pike, i-pikeperch ne-carp. Ama-squid, ama-mussels, ama-shrimps nama-scallops aphelele njengendishi ezimele kanye nengxenye yamasaladi. Awukwazi ukuthosa inyama nenhlanzi. Izitsha eziphekiwe nezibhakiwe zinempilo futhi zinempilo; zithandwa kakhulu phakathi kweziguli zesilisa, ikakhulukazi lezo ezihlushwa imikhawulo.
Ubisi noshukela wegazi
Kuyadingeka ukukhipha ubisi olunamafutha ekudleni:
ukhilimu, ukhilimu omuncu,
ibhotela, imajarini, okusakazwayo,
Le mikhiqizo iyasiza kwabesifazane abakhulelwe, izingane, ngakho-ke kancane kancane zingadliwa ngoshukela ophezulu wegazi. Kepha i-kefir enamafutha amancane, ubisi olubilisiwe olubhakwe, ushizi Wezempilo, ushizi we-feta, i-suluguni, ushizi wekhokhini enamafutha amancane kanye neyogathi engafakiwe isetshenziswa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Kubalulekile ukulawula usayizi wengxenye, ngakho-ke yize ungekho imikhawulo, awudingi ukuphuza ilitha le-kefir esihlalweni esisodwa.
Izinhlamvu noshukela ophezulu
I-Barley porridge ibaluleke kakhulu kwisifo sikashukela.
Ama-cereals angumthombo onempilo we-fiber kanye nama-carbohydrate ayinkimbinkimbi. Ziyisisekelo sokudla, ezanele kahle, okulula ukuzilungiselela futhi ezitholakala kubantu abanemali ehlukene. Izinhlamvu ezinconyiwe zokwenza ushukela ube ngokwejwayelekile:
ukolweni nezinhlobonhlobo zawo: i-bulgur, umzala, i-arnautka.
Ushukela omningi awuhambisani ne-semolina, kanye nezinhlobo ezimhlophe zerayisi. Izinzuzo zalezi okusanhlamvu akuvimbi ukulimala okungenzeka emzimbeni. Izinhlamvu ezisheshayo kanye ne-granola nazo ziyingozi. Kubandakanya ama-stabilizer kanye nama-preservatives, inani elikhulu le-sweeteners. Ukunciphisa ushukela wegazi, kungcono ukhethe amajikijolo aqhekekile.
Kwenqatshelwe ukudla isobho elinamafutha kuma-broths enyama - hodgepodge, borscht, lagman. Noma iyiphi inkambo yokuqala ilungiswa ngaphandle kokungeza inyama. Ungabilisa ucezu ngokwehlukana, futhi ngaphambi kokusebenzela ukudilika ngqo ku-ipuleti. Kuyasiza ukudla ukhukhamba, i-okroshka, amakhowe nesobho lebhontshisi, i-borscht kumhluzi wemifino, isobho le-puree elenziwe ngethanga eliluhlaza. Umhluzi onamafutha ukhulisa ushukela.
Nge-dessert, ungabhula ama-mousse ngaphandle koshukela.
Kuvunyelwe ukupheka i-sorbet, i-berry mousse, amaswidi jelly.
Ungadla isinkwa se-bran ne-rye. Ukubhaka ngofulawa omhlophe akwamukeleki.
Amafutha omnqumo nemifino angezwe ekudleni kancane.
Amaqanda abilisiwe, abilayo, abhakwe. Ngezinga eliphakeme le-cholesterol "embi", ama-yolks angaphansi kwemikhawulo.
Thenga amasosa, ukudla okusheshayo, imayonesi, kuthinta kabi ushukela.
Ushukela wegazi ophakeme, awukwazi ukudla ama-roll, amaswidi, imigoqo, amakhekhe namakhekhe ngo-ukhilimu onamafutha.
Ukwehlisa ushukela wegazi, kuyadingeka ukulawula ubungako bengxenye:
imifino ehlutshiwe, lisikiwe, amazambane abunjiwe - afinyelela ku-150 g,
isidlo sokuqala singama-200-250 g,
imikhiqizo yenyama noma inhlanzi - 70 g,
isinkwa - ucezu olungu-1,
uketshezi - 1 inkomishi.
Kusekuseni kwasekuseni, amakhekhe enhlanzi
izaqathe ezigayiwe, oatmeal emanzini,
iphalishi le-buckwheat, iqanda elibilisiwe,
ushizi wekhishi elinamafutha aphansi ngepende,
ikhekhe lezinhlanzi, utamatisi,
ibhali, ushizi omhlophe, imifino,
isigaxa somusi ngamakhowe, isaladi yemifino,
i-oatmeal entshontshiwe, i-kefir, ibhilikosi.
ushizi wasekhishini ngaphandle koshukela,
i-orange noma i-grapefruit.
ukhukhamba, inyama ebhakiwe, isaladi yeklabishi,
i-borsch, i-millet porridge, i-steam cutlet, isaladi yamakhukhamba nethanga eliluhlaza,
isobho seklabishi, iklabishi elinenkukhu enenkukhu,
isobho lamakhowe, isaladi lokudla kwasolwandle okufudumele, inhlanzi eshisayo,
i-pea isobho puree, i-turkey nemifino eyosiwe, utamatisi kanye nesaladi le-mozzarella,
isobho likabhontshisi, upelepele ongahluziwe, utamatisi nesaladi lamakhukhamba,
i-zucchini nesobho lamazambane, i-casserole yamazambane, isaladi karoti enamantongomane.
I-yogurt engenamsoco yokudla okungenamsoco i-snack enhle kakhulu.
ushukela yogurt yamahhala
ubisi olubilisiwe olubhakwe,
ukhokho ushizi casserole.
i-omelet ngemifino, ifilimu ebhakwe,
ama-turb wenyama, imifino esisikiwe,
i-zucchini casserole, umhluzi wenyama yenkomo,
inhlanzi eyosiwe, pepper ebhakwe,
usiki, ithanga iphalishi, isaladi,
indishi yasolwandle, ushizi omhlophe, utamatisi,
inyama ebilisiwe, isaladi ngemifino namaqanda.
I-Cottage Cheese Casserole
Hlikihla ipakethe loshizi olunamafutha amancane ngaphandle koshukela ngesihlungo.
Faka ama-yolks ama-2, i-zest zemon, i-vanilla, isinamoni kanye ne-100 ml yobisi, hlanganisa.
Beat ukukha amaprotheni ama-2 ngesipuni sikasawoti.
Hlanganisa ngobumnene i-cottage shizi nama-squirrel.
Gcoba leli fomu ngebhotela, ufafaze ngofulawa we-rye. Thela ingxube.
Bhaka kuhhavini oshaqiwe imizuzu engama-30.
Esikhundleni sikashukela, engeza i-apula yashizi endishini eseqediwe.
Indlela elula yokwenza i-berry jelly enempilo.
Ama-Defrost amajikijolo, uhlanganise ne.
Qhafaza isikhwama se-gelatin engilazini yamanzi ashisayo. Ungangeza indawo kashukela. Hlanganisa namajikijolo bese uthele kubumba. Kupholile.
Bilisa inkukhu, usike fake.
Pheka amaqanda ama-4 nama-100 g kabhontshisi oluhlaza, bhaka izaqathe. Sika ku-cubes alinganayo.
Cweca i-apula eluhlaza, usike, engeza kwisaladi.
Ngokugqoka, hlanganisa i-yogurt enamafutha aphansi, isinaphi, isoso le-soya. Hlanganisa nesaladi, usawoti uhlanganise. Hlobisa ngemifino.
Ushukela omkhulu wegazi ungabangelwa ukusebenza ngokweqile, ifa, kanye nezifo ezingamahlalakhona. Ukondliwa okufanele ngoshukela ophezulu wegazi kuphela ekuqaleni kunzima. Ukucabanga okuncane ekhishini nokuhlelwa kokudla kuzokusiza ugweme ubunzima. Noma yikuphi ukudla kuvusa ushukela wegazi, futhi usebenze kanzima ukuze wehlise.
Lapho ukhetha izithelo ezomisiwe, abanesifo sikashukela kufanele bagxile enkombeni ye-glycemic yemikhiqizo, ukuhlangana koshukela ezithelo ezomisiwe. Abaningi bakweluleka ukuthi uzenze izikhala ngokwakho: okuwukuphela kwendlela ongaqiniseka ngayo ngekhwalithi yezithelo ezomisiwe.
Uma ukhetha izithelo ezomisiwe ngenani elincane le-kcal ne-GI ephansi, ungazifaka ngokuphephile ekudleni. I-Endocrinologists ivumela iziguli zabo ukuthi zisebenzise ngefomu elomile:
Kepha ama-apula kuphela, omisiwe, amapheya, ama-prunes kanye nama-apricots omisiwe ngokwemvelo athokozela ukuthandwa. Kepha izithelo eziningi ezishisayo zingcono. Ubhanana owomile, amakhiwane, uphayinaphu, ukwatapheya, papaya awela ngaphansi kokuvinjelwa.
Isifo sikashukela asidingi nje kuphela ukwazi ukuthi yiziphi izithelo ezomisiwe ezivunyelwe abanesifo sikashukela. Kubalulekile ukuba baqaphele inkomba ye-glycemic, inani lamayunithi esinkwa nokuhlanganiswa kwe-BZHU ohlotsheni ngalunye lwezinhlobo.
Enye yezinhlobo eziphephe kunazo zonke zezithelo ezomisiwe ama-prunes:
inkomba ye-glycemic - 40,
okuqukethwe kwekhalori - 246,
carbohydrate - 65,5,
amaprotheni - 2.3,
amafutha - 0,
inani lamayunithi esinkwa kuma-6 ama-PC. ama-prunes (cishe ama-40 g) - 1.
Abantu abaningi bathanda omisiwe. Kepha ungaqonda ukuthi kuphephe kangakanani kwabanesifo sikashukela uma uthola imininingwane elandelayo ngakho:
inkomba ye-glycemic - 65,
okuqukethwe kwekhalori - 296,
carbohydrate - 78,5,
amaprotheni - 2,52,
inani le-XE kuma-20 ama-PC. (cishe 30 g) - 1.
Uma kunikezwe inkomba ye-glycemic ephezulu, omisiwe wohlobo 2 sikashukela ungadliwa ngobuningi.
Amabhilikosi owomile ayathandwa futhi:
inkomba ye-glycemic - 35,
okuqukethwe kwekhalori - 241,
carbohydrate - 62,6,
amaprotheni - 3.39,
inani le-XE kuma-6 ama-PC. (cishe 30 g) - 1.
Ungakhohlwa ngama-apula omisiwe:
okuqukethwe kwekhalori - 273,
carbohydrate - 68,
amaprotheni - 3.2,
inani le-XE kuma-20 g we-apula (mayelana ne-2 tbsp.spoons ye-lobules) - 1.
Ama-diabetes abomisiwe ama-diabetes angadla ngokuphephile:
carbohydrate - 62,
inani le-XE nge-16 g yomkhiqizo - 1.
Kepha othandekayo ngezinsuku eziningi kufanele asetshenziswe ngokucophelela. Inkomba yabo ye-glycemic ingama-70. Ngesifiso esikhulu, abanesifo sikashukela abakwazi ukukhokha ngaphezu kwama-2-3 ama-PC. ngosuku.
Abanesifo sikashukela akufanele bakhululeke ngokuphelele abaphathe ngesimo sezithelo ezomisiwe. Ngemuva kwakho konke lokhu, kuyigumbi lamavithamini kanye nezinto ezidingekayo emzimbeni.
Isibonelo, omisiwe afaka:
amavithamini C, B,
Amapayipi enziwe kunoma yiluphi uhlobo lwamagilebhisi abhekwa njengewusizo. Kungaba namathambo noma angenawo, alula noma abe mnyama. Ngokusetshenziswa kwayo njalo ngokulinganisa, okulandelayo kuyaphawulwa:
Ukwenza kube lula ukusebenza kwamathumbu,
ukuqinisa uhlelo lwezinzwa
umsebenzi wezinso owenziwe ngcono
ukususwa kobuthi obunqwabelanayo kanye noketshezi olwedlulele,
Welulekwa ukuthi adle kuphela kulezo zimo lapho isifo sikashukela singalawulwa. Uma isimo siba sibi kakhulu, khona-ke kuyadingeka ukubonisana nodokotela we-endocrinologist.
Izithelo ezomile ezinambitheka kakhulu futhi ezinempilo zingama-apricots omisiwe. Ngenxa yenkomba yayo ephansi ye-glycemic, kuvame ukunconywa kwabanesifo sikashukela. Ukwakheka kwama-apricots omisiwe aqukethe:
amavithamini B, P,
i-nicotinic, i-salicylic, i-citric acid,
Ingadliwa ngo-dessert ngemuva kwesidlo esikhulu. Odokotela abancomi ukuyisebenzisa esiswini esingenalutho ngenxa yemiphumela emibi engaba khona esiswini.
Izazi eziningi zokudla kanye nama-endocrinologists zithi izithelo ezomisiwe nesifo sikashukela kuyahambelana ngokuphelele. Into esemqoka ukwazi ukuthi zingakanani izinhlobo zezithelo ezivunyelwe nokuthi zingadliwa malini. I-Prune ukuthandwa okufanelekile. Ngokusebenzisa kwayo njalo:
ukusebenza kwamathumbu kwenziwa okujwayelekile: umlotha unomphumela omnene we-laxative,
izivikelo zomzimba ziyaqina.
I-Prune ihamba kahle neminye imikhiqizo: yengezwe kumasaladi, emifino kanye nasezitsheni zenyama. Kodwa akufanele usebenzise kabi: ngentshiseko eyeqisayo, ingakhuphula ukugcwala kweglucose.
Isebenziseka kwabanesifo sikashukela yimadethi. Kepha zingadliwa ngamanani alinganiselwe ngenxa yenkomba ye-glycemic ephezulu. Uma isifo sikashukela singalawulwa, khona-ke i-endocrinologist ingavunyelwa ukuthi idle izinsuku eziningana nsuku zonke. Kubandakanya:
Ukusetshenziswa kwabo kukuvumela ukuthi ukhohlwe ukuqunjelwa, okuvame ukuthinta abanesifo sikashukela abanesifo sohlobo 2. Ngasikhathi sinye, baguqula isimo sesibindi nezinso futhi bavuse amasosha omzimba.
Ukukhetha izithelo ezomisiwe, umuntu akufanele akhohlwe mayelana nokuthi "ukomisa" okujwayelekile - ama-apula kanye namapheya. Uma uwafaka ekudleni kwakho kwansuku zonke, kukhona:
ukuvuselela izivikelo zomzimba,
inqubo yokwemvelo inqubo,
ukwenziwa ngcono kohlelo lokugaya,
ukukhuphuka kokuqina kwezindonga zemithambo yegazi.
Ukudla i-pears eyomile nama-apula kuvimbela ukuhlukaniswa kwegazi.
Ukuthola ukuthi zingakanani izithelo ezomile ezingadliwa nsuku zonke kungcono ngokuhlangana ne-endocrinologist. Angancomi ukuthi ungazidli nje kuphela ngendlela yazo eluhlaza, kodwa futhi uzisebenzise njengesisekelo sokulungiselela ama-compotes, ama-kissels.
Ngingayiphuza i-compote yezithelo eyomisiwe yeshukela? Odokotela bavunyelwe ukuphuza lesi siphuzo kubo bonke abanesifo sikashukela, inqobo nje uma ushukela kungezwa kuwo ngenkathi kulungiswa. Le compote ingumthombo wamavithamini namaminerali amaningi adingekayo kwabanesifo sikashukela. Ungangezela ukusebenziseka kwayo uma ungeza ama-rose okhalweni ngenkathi upheka.
Ukucabanga ngesidingo sokusebenzisa izithelo ezomile, kungakuhle ukuthi uthintane nodokotela we-endocrinologist. Udokotela angakutshela ukuthi uluhlobo luni lwezithelo nokuthi udla malini. Zingafakwa ngokuphephile ekudleni uma isifo sikashukela singalawulwa. Kepha awukwazi ukusebenzisa kabi lobu bumfihlo.
Onke ama-nuances abalulekile wamaminerali wamanzi wesifo sikashukela sohlobo 2
Kanye nemithi esemthethweni, ochwepheshe batusa amanzi amaminerali onhlobo lwesifo sikashukela 2.
Ikhambi elingelinye lokwelapha lesi sifo liyadingeka ukubuyisela ipheshana esiswini futhi lisungule ukushintshwa kosawoti okutholakala emzimbeni.
Njengomphumela we-fluid fluid, umsebenzi wezitho zangaphakathi, kubandakanya i-pancreas, uyaqala kabusha, okubaluleke kakhulu kwisifo sikashukela mellitus.
Amanzi amaminerali anomthelela omuhle:
Kuthuthukiswa isivinini sokucubungula i-carbohydrate,
Isebenza ngama-insulin senseptivity receptors atholakala phezulu kolwelwesi lweseli,
Iqhakambisa umsebenzi wama-enzyme obhekene nokukhiqizwa kanye nokwanda kwe-hormone yezicubu ezincike kwi-insulin.
Ukunciphisa isimo sikashukela, kufanele uhambisane nemithetho ethile:
Ngaphambi kokuqala umphumela wokwelapha emzimbeni ngamanzi amaminerali, kufanele uthintane nodokotela wakho. Ukwehla usawoti okuqukethwe kuluketshezi kungathinta kabi inhlala-kahle yomguli kanye nesifo. Uchwepheshe uzocacisa ukuthi yiliphi ithamo elivunyelwe ukusebenzisa isiguli esithile - kuyinto engafani nomuntu ngamunye futhi kuya ngesimo sesigaba sesisu sesiguli.
Yonke inqubo yokwelashwa kwamanzi kufanele ibe ngaphansi kokuqashwa njalo kodokotela, ikakhulukazi uma besebenzisa amanzi amaminerali esitolo. Inosawoti omningi, uma uqhathaniswa nentwasahlobo futhi inamandla emzimbeni.
Izinhlobo ezahlukahlukene zotshwala ezethulwe ezitolo zidinga umthamo ngamunye - ukwakheka kwenani lezakhi ezincibilikisiwe kuzo kungahluka kakhulu.
Uhlobo lwamanzi asetafuleni lezokwelapha linamazinga kasawoti aphansi, okuvumela ukuthi lisetshenziswe lapho kuphekwa. Ayinayo imiphumela emibi ebonakalayo emzimbeni futhi ingasetshenziswa iziguli ezinesifo sikashukela ngamanani angenamkhawulo.
Izici zendlela yokusebenza
Ukuzijwayeza kuthathe isikhathi eside ukuthi amanzi amaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2 asithinta kakhulu isiguli. Ngokwakheka kwamanzi anjalo, ngaphezu kwekhabhoni ne-hydrogen, kunezindlela eziningi ezahlukahlukene zosawoti. Amanzi amaminerali aqukethe inani elikhulu le-hydrogen awusizo kakhulu kwabanesifo sikashukela. Lokhu kuholela ekujuleni kwenqubo yokukhiqizwa kwe-insulin. Ngaphezu kwalokho, i-magnesium ne-calcium, phosphorus ne-fluorine kusizakala kakhulu kumanyikwe. Ngenxa yalokhu, izinga loshukela liyancipha ngokuqondile.
Kuyabhekwa ukuthi amanzi amaminerali abuyisela kanjani ukusebenza kwesibindi ngempumelelo futhi enza isimo sibe sesilinganisweni samanzi emzimbeni. Lokhu ngokuvamile kwehlisa i-cholesterol. Inhlala-kahle yesiguli iyathuthuka, wehlisa isisindo.
Ekhuluma ngomshini womphumela wamanzi amaminerali emzimbeni wesifo sikashukela, kubalulekile ukusho ukuthi kuyingozi ukuthwalwa ngokusetshenziswa ngokweqile. Lokhu kungadala ukuqhakaza okungathandeki esiswini, okuzohambisana nokukhuphuka okuthe xaxa. Ukushaya kwenhliziyo kungenzeka. Isizathu ukuthi ama-bubble amaningi kakhulu wegesi azothola amathumbu. Ngeke babe nesikhathi sokuwa. Ngakho-ke, kufanele ukhumbule njalo isilinganiso esifanele sokuphuza amanzi amaminerali.
Umgomo ukunciphisa izimpawu zesifo sikashukela. Ngokusekelwe kulokhu, imithetho yokwamukelwa kufanele ithuthukiswe.
Ngaphambi kokuqala inkambo yokusebenzisa, ukuvakashelwa udokotela kuyimpoqo. Nguchwepheshe okufanele anikeze izincomo eziphambili ezihlose ukukhipha inzuzo ephezulu ngokusebenzisa amanzi amaminerali. Futhi, udokotela uzonikeza izeluleko ngomthamo ofanele.
Imvamisa, ochwepheshe beluleka ukuthenga nokuphuza amanzi osekuhlolwe amashumi eminyaka. Lokhu, kunjalo, nguBorjomi no-Essentuki. Futhi-ke, iPyatigorsk. Imibuzo yemithamo yomuntu ngamunye ixazululwa ngemuva kokuba kukhethwe uhlobo lwamanzi. Kuyacaca ukuthi izinhlobo zamaminerali ezisohlwini ezaziwayo zinezingoma ezahlukahlukene. Lokhu kusho ukuthi izinto ezihlukile ziyoncibilika kuzo.
Uma sikhuluma ngamanzi asetafuleni, khona-ke, acwile usawoti omncane. Lokhu kusho ukuthi ingasetshenziswa ngokuphepha ukuze kuphekwe ukudla kuyo. Ngeke kube nomphumela olimazayo emzimbeni wesifo sikashukela.
Umthamo nesikhathi sokusetshenziswa
Umbuzo udinga indlela ekhethekile enemininingwane. Umzimba wesiguli ngasinye ungumuntu uqobo. Kubaluleke kakhulu ukuthi akukho zinkinga ezinkulu zesifundo salesi sifo. Kufanele futhi unake inhlala-kahle yesiguli kanye nesimo sezitho zakhe zokugaya. Ngokuvamile, izincomo zingokulandelayo.
Ukuze usebenzise ingxenye efakiwe yamaminerali, kahle, kufanele kube imizuzu engama-30 ngaphambi kokuhlala etafuleni. Yiba yisidlo sasekuseni, isidlo sasemini, isidlo sakusihlwa noma ukudla okulula okulula. Inani lokwamukelwa ngosuku alwedluli kwe-3. Lesi sikhundla sisebenza kulabo abanesifo sikashukela esisisu siphilile ngokuphelele. Ngokuphambuka okuningana ekusebenzeni kwesisu, kwenziwa ukulungiswa kweqiniso, endaweni yokunciphisa inani lama-receptions. Zikhawulelwe ku-2 ngosuku.
Labo abanyuse i-acidity yesisu kufanele bahlehlise ukubamba kwamanzi amaminerali ihora eli-1. Lokhu kusho ukuthi amanzi amaminerali adakwa emahoreni angama-1.5 ngaphambi kwasemini. Lapho i-acidity iphansi, bese unciphisa isikhathi sokuvunyelwa. Siphuza amanzi futhi ngemuva kwemizuzu eyi-10 sihlala phansi etafuleni.
Esontweni lokuqala, umzimba uyajwayela. Ungakhetha umthamo wansuku zonke we-100 ml. Ukusuka emavikini amabili siletha ikota ilitha. Iziguli ebusheni zithatha u-150 ml ngosuku.
Noma konke kuhamba kahle futhi umzimba uphendula kahle, akunconywa ukwandisa umthamo wansuku zonke kakhulu. Kungabhekwa umthamo omkhulu we-400 ml .. Lokhu akulimazi umzimba.
Kubaluleke kakhulu ukunaka izinga lokushisa lamaminerali akhethelwe ukusetshenziswa. Ngokusho kochwepheshe, kufanele kufudumale. Ngemuva kwalokho umphumela wokwelashwa uyathuthukiswa.Udaba kufanele luhanjelwe ngaphandle kokweyisa. Ngamanye amagama, amanzi okuphuza afudumele, kepha ngokuqinisekile awashisi.
I-enema inqunywe ngudokotela. Njengomthetho, lokhu kwenziwa ezimweni lapho, ngaphezu kwesifo sikashukela, isiguli sine-ketoacidosis. Futhi, ama-enemas abaluleke kakhulu ekusebenzeni kahle kwesisu namathumbu, ngokwesibonelo, ngoshevu wokudla.
Le ndlela yokwelashwa ithola ukuthandwa okukhulu. Ingabonakala njengokwengezwa okukhulu enkambweni yokwelashwa.
Ukugeza okuhleliwe kubalulekile. Lokhu kunethonya elihle kuma-pancreas futhi kuvamisa namazinga kashukela.
Lapho isifo sikashukela sithambile, odokotela batusa ukuthatha indawo yokugeza efudumele. Amanzi okuwo akufanele ashise ngaphezu kwama-38 degrees. Lesi yisizinda esihle kakhulu sokuguqula ukusebenza kwamanyikwe.
Esimweni lapho isifo sikashukela sinesimo esiyinkimbinkimbi, izinga lokushisa lokugeza liyancishiswa libe ngama-33 degrees.
Kungcono ukukhetha amanzi e-hydrogen, radon noma i-hydrogen sulfide.
Yonke inqubo ithatha imizuzu eyi-15. Inani eliphansi lokugeza li-10. Imvamisa yokwamukelwa ngu-4 ngeviki.
Isikhathi esihle kakhulu sokuhlela ukugeza kuba ntambama. Kepha, kunjalo, hhayi ngokushesha lapho ushiya etafuleni. Kufanele kuthathe imizuzu engama-60-80. Kakade ngaphambi kwenqubo, kufanele uvumelane nakho. Omakhalekhukhwini bayanqanyulwa, imizwa yenziwa inesimo esihle kuphela. Kungenzeka ngisho nokuzindla ukwengeza ukuqinisa umzimba inqubo enhle futhi ewusizo. Kufanele futhi uziphathe ngemuva kokugeza. Cabanga okuhle kuphela, khumbula okumnandi kuphela.
Kuyasiza kakhulu ukulala ngemuva kokugeza. Ngesikhathi sokulala, umzimba ubuyiselwa ngokuphelele. Lokhu ngokuvamile kuzothuthukisa umphumela omuhle wenqubo.
Ungalusebenzisa kanjani ushukela wegazi ngokushesha kwabanesifo sikashukela?
Izinhlobo Zamanzi Amaminerali
Amanzi ahlukaniswa ngokwakhiwa, ngoba iqukethe izinto ezahlukahlukene:
u-ion kasawoti we-carbonic acid,
Ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, ukuphuza amanzi amaminerali kubaluleke kakhulu: kuthuthukisa i-carbohydrate metabolism, kusebenze ama-insulin receptors futhi kuthuthukisa imiphumela yama-enzyme abhekene nokulethwa kweglucose kumaseli wezicubu.
Amanzi e-sulphate ne-bicarbonate anganciphisa inani le-acetone emfudlaneni wegazi, andise izindawo ezigcinwa nge-alkaline futhi asuse ukuqoqwa kwezinto ezi-waxxidized. Uma uphuza njalo amanzi amaminerali, umzimba uzokhululwa kuma-acid wamahhala, amafutha aphelele, namazinga e-cholesterol azokwehla.
Ngasikhathi sinye, inani lama-phospholipids elibhekele ukuthuthwa kwamafutha lenyuka. Ngohlobo 2 lwesifo sikashukela, ukusetshenziswa njalo kwamanzi amaminerali kuqinisa isibindi futhi kusiza ukubuyisela ibhalansi yamanzi, ngakho-ke isiguli siyayeka ukuzizwa somile.
Amanzi ahlanganisiwe kanye ne-carbonated amaminerali aqala inqubo yokuvuselelwa kanye ne-oxidation, ngakho-ke, amathuba okukhiqiza i-insulin akhuphuka kakhulu. Isifo sikashukela sohlobo 2 sivame ukuphathwa ngamanzi okucetshiswe ku-hydrogen sulfide.
Ngakho-ke, i-Essentuki (4.17) ibuyisela amaprotheni kanye ne-lipid metabolism, ithuthukise ukuvuvukala kwesibindi.
Yini amanzi azuzisa kakhulu abanesifo sikashukela?
Ukwelashwa ngamanzi amaminerali wesifo sikashukela sohlobo lwe-1 no-2 kwenziwa ngempumelelo kusetshenziswa:
Uhlobo, umthamo kanye lokushisa kunqunywa udokotela oya khona. Izincomo zakhe zincike eminyakeni yobudala besiguli, uhlobo lwezifo nezinkinga, uma zikhona.
Ukwelashwa okufanele ngamanzi amaminerali ukuthi isiguli sizophuza umswakama onikeza impilo ngokuqondile kumthombo. Ngakho-ke, uma kungenzeka, kungcono ukuthi umuntu onesifo sikashukela aye kuma-sanatorium ezokwelapha, futhi ekhaya angaphuza amanzi asebhodleleni.
Ukwelashwa okumbiwa phansi
Ukwelashwa kwesifo sikashukela sohlobo 2 ukuthatha amanzi kathathu ngosuku ngehora 1 ngaphambi kokudla. Ngezinga eliphansi le-acidity, amanzi amaminerali adakwa imizuzu eyi-15 ngaphambi kokudla ukudla, ukuthola secretion okwenyusiwe ujusi wesisu.
Uma i-acidity yejusi esiswini kuyinto evamile, khona-ke baphuza amanzi imizuzu engama-40 ngaphambi kokudla. Nge-acidity ephezulu, amanzi amaminerali adakwa emahoreni angama-1-2 ngaphambi kokudla.
Naka! Ukuze ukwelashwa kungalimazi, imithamo yokuqala akufanele ibe ngaphezu kwe-100 ml. Ngemuva kokuthi zingakhushulelwa ku-1 inkomishi.
Ungalukhulisa udosi uma kungekho okuphikisana. Ngakho-ke, inani lingakhuphuka lifinyelele ku-400 ml. Kepha kungcono ukuhlukanisa imithamo kube yimithamo emi-2 ngokuphumula kwemizuzu engama-30 noma uthathe amanzi phakathi kokudla.
Ngosizo lwamanzi amaminerali, izifo zesistimu yokugaya ukudla ziyelashwa:
Ngasikhathi sinye, izinga lokushisa kwamanzi amaminerali akufanele libe ngaphezulu kwama-degree angama-40. Ukwelapha kuthatha inyanga eyodwa, bese ikhefu lenzelwa izinyanga ezi-3.
Naka! Ngesikhathi sokushisa, amanzi alahlekelwa yi-hydrogen sulfide ne-carbon dioxide, anezakhiwo ezinhle futhi athuthukisa izinqubo ze-metabolic.
I-Enema ne-gastric lavage
Izindlela zokusebenzisa amanzi amaminerali ngaphakathi zifaka i-enemas, i-duodenal tube nokugeza amathumbu nesisu. Ukusetshenziswa kwalezi zinqubo kubalulekile uma udinga ukwelapha izinkinga ezivame ukwenzeka ngohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2.
Naka! I-duodenal tubage imiselwe izifo ze-gallbladder kanye nesibindi.
Isiguli siphuza ama-250 ml wamanzi afudumele amaminerali, lapho kuwo kufakwa i-15 g ye-magnesium sulfate, esiswini esingenalutho. Ngemuva kwalokho uphuza enye i-150 ml.
Ngemuva kwalokho isiguli kufanele silale ngasohlangothini lwaso, bese kufakwa ipayipi lokushisa elifudumele endaweni yesibindi. Kulesi sikhundla, kufanele achithe amahora angu-1.5. I-Tubage kanye ne-bile lisusa amangqamuzana amhlophe egazi, i-mucus kanye nama-microorganisms, ngenxa yokuthi lapho kususwa ama-factor ahlukahlukene okuvuvukala.
Uma umuntu onesifo sikashukela enakho, ngaphezu kwesifo esiyimbangela, izifo ezingapheliyo zesisu, udokotela angakunika ukunqwabelana nama-microclysters. Izindlela zokuhlola ukuphathwa kwamanzi amaminerali zivame ukusetshenziswa kushukela ngokuhlanganiswa ne-ketoacidosis.
Ukusetshenziswa Kwangaphandle: Amaminerali Bath
Ukusetshenziswa kwangaphandle kwamanzi amaminerali sikashukela nakho kuyasiza kakhulu. Isibonelo, ukuthatha ubhavu wezimbiwa kusebenze ukukhishwa kwe-acetylcholine, i-histamine nezinye izinto.
Abalamuli kanye negazi bafika esakhiweni ngasinye, kuba nomphumela oqondile esikhungweni sobuchopho. Ngakho-ke, ushintsho olusebenzayo ohlelweni lwezinzwa lufaka isandla ekujezisweni kwazo zonke izitho zomzimba.
Amabhati wamanzi amaminerali athuthukisa i-carbohydrate metabolism ngokunciphisa ushukela wegazi nokulawula ukuvikelwa kwe-insulin. Ngokuyisisekelo, amabheshu abekelwe izinhlobo ezahlukahlukene zezinkinga zesifo sikashukela - izifo zohlelo lokugaya ukudla, amaseli wezinzwa nezinhliziyo, njll.
Umphumela omuhle ungatholakala ngokuthatha amagesi wegesi wezimbiwa (i-radon, i-hydrogen sulfide, njll.). Futhi ngesimo sobumnene noma esifushane sesi sifo ,geza okufudumele asetshenzisiwe (ubuningi bama-degrees angama-38).
Ama-diabetes anesifo esilingana nesokugula kakhulu anconyelwa ukusebenzisa amabha amaminerali ngokushisa okuphansi (cishe ama-degree angama-33). Izinqubo zamanzi akufanele zenziwe izikhathi eziphindwe kane ngezinsuku eziyi-7. Isikhathi sesikhathi esingu-1 yimizuzu eyi-15, inkambo yokwamukelwa izinqubo eziyi-10.
Naka! Iziguli esezikhulile iminyaka yobudala zibekiwe amabhathi okushisa, izinga lokushisa lazo akufanele libe ngaphezulu kwama-34 degrees, futhi isikhathi seseshini kufanele sibe ngaphezulu kwemizuzu eyi-10.
Kunemithetho ejwayelekile okufanele ilandelwe ngesikhathi sokwelashwa kwamanzi ukuze kwenziwe ngcono ukusebenza kwenqubo:
ukugeza akufanele kuthathwe ngaphambi nangemva kokudla ukudla (isikhawu esincane siyimizuzu engama-60),
sesimweni sokukhathala noma senenjabulo, izinqubo ezinjalo azinconywa,
ekugcineni kwenqubo, isiguli kufanele siphumule (kusuka emizuzwini eyi-10 kuye kwali-1).
Amaminerali amanzi ekwelapheni isifo sikashukela
Amanzi amaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2 angasiza ekujwayezeni ukungasebenzi kahle kwemisebenzi ethile yomzimba, uma ungayisebenzisa kahle. Lokhu kufakazelwa izibuyekezo eziningi zodokotela neziguli ngokwazo, esezikwazi ukubhekana nenkinga yazo. Kunemininingwane eminingi ngezinzuzo zamanzi amaminerali, kepha angakanani amanzi okuphuza nokuthi uwasebenzisela ukwelashwa kanjani?
Ukusebenziseka kokuphuza amanzi amaminerali avela kuhlobo 2 lwesifo sikashukela kuchazwa indlela yokwenza kwezinto zomuntu ngamunye emzimbeni wesiguli. Ngokwakheka, wonke amanzi amaminerali ahlukaniswe izinhlobo eziningi. Ingaqukatha i-hydrogen, i-carbon, usawoti ohlukahlukene wamaminerali.
Ukuzilolonga kukhombisa ukuthi uhlobo lwamanzi amaminerali angu-2 ngenani elikhulu le-hydrogen lusiza kakhulu kwabanesifo sikashukela. Zonke izingxenye zalo ezakha izakhi zizoqala ukukwenza kancane kancane ukukhiqizwa kwe-insulin futhi ngaleyo ndlela zibuyisele imisebenzi yezitho zomzimba. Usawoti we-magnesium, calcium, phosphorus ne-fluorine unomthelela omuhle kuma-pancreas. Ngenxa yalokhu, lo mzimba uqala ukukhiqiza i-insulin encane, ngenxa yokuthi leveli kashukela yehla kanjani.
Njengomphumela wokwelashwa ngezinhlobo zamaminerali ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2, ukusebenza kwesibindi okujwayelekile kanye nokulinganisela kwamanzi emzimbeni kuyabuyiselwa. I-cholesterol iyancishiswa, ethinta kahle isibalo nenhlala-kahle yomuntu. Kepha ngakho konke lokhu, kufanele kukhunjulwe ukuthi inani ngokweqile lamanzi amaminerali aqediwe kungaholela ekushiseni kwenhliziyo, ukuqhakaza nokugcwala. Isizathu ukuthi ama-Bubble wegesi, angahlali enesikhathi sokuwa emathunjini ngendlela esifike ngesikhathi.
Ukwelapha noma yiluphi uhlobo lwesifo sikashukela noma okungenani ukunciphisa izimpawu zalesi sifo esibuqili, kufanele wazi imithetho eyisisekelo yokusebenzisa amanzi amaminerali noma kwentwasahlobo ekudleni:
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa ngamanzi amaminerali kashukela, kufanele uthinte uchwepheshe. Iqiniso ngukuthi kunconyelwa ukuphuza amanzi acwebezelayo ngaphandle kokweyisa. Ngemuva kwakho konke, ukwehla usawoti onempilo emzimbeni wesifo sikashukela kungaholela emiphumeleni emibi. Udokotela uzokutshela ukuthi imuphi umthamo ecaleni elithile kubhekwa njengokuvunyelwe okuphezulu. Kuzodingeka kunamathelwe ngokuqinile.
Ukwelapha isifo sikashukela ngamanzi aphilayo nalawa afile kuyindaba ebaluleke kakhulu. Ngakho-ke, kungcono uma inqubo ilawulwa uchwepheshe. Ikakhulu uma kukhulunywa ngamanzi athengiwe. Amanzi anjalo "afile" aqukethe usawoti okuningi kunamanzi ajwayelekile entwasahlobo, ngakho-ke anomthelela onamandla emzimbeni.
Ngokuvamile, ochwepheshe balule ukwelashwa ngamanzi anezitolo ezifana neYessentuki, Mirgorod, Pyatigorsk, Borjomi. Ngamanzi athile athile, umthamo ngamunye unqunywa ngokuya ngenani lezinto ezincibilikisiwe kulo.
Ngokwehlukana, kufanele kushiwo ngamanzi amaminerali etafula. Ngokungafani nezinye iziphuzo, inani likasawoti kulo liphansi kakhulu, ngakho lolu hlobo lwamanzi lungasetshenziswa ngisho nasekuphekeni. Kulokhu, abanesifo sikashukela akufanele banciphise kakhulu, ngoba ayinamphumela omzimba emzimbeni.
Uma sibheka zonke izincomo ezichazwe ngenhla, khona-ke amanzi amaminerali onhlobo lwesifo sikashukela 2 azoletha izinzuzo kuphela futhi ngeke anikeze imiphumela emibi. Ukwazi umuzwa wokulingana - lokhu kuyisihluthulelo esikhulu esizosiza ukubuyela emuva ngosizo lwamanzi athengiwe.
Imiphi imithamo ongayisebenzisa
Sizohlala ngokwehlukile kulokho imithamo futhi kufanele uphuze nini amanzi amaminerali ekwelapheni isifo sikashukela. Lapha, ngezindlela eziningi, konke kuncike ebukhona noma ukungatholakali kwezinkinga zesifo, inhlala-kahle kanye nesimo sepheshana lesisu. Imithetho le yile elandelayo:
Ngokufanelekile, amanzi amaminerali adakwa cishe isigamu sehora ngaphambi kokudla. Lokhu kufanele kwenziwe izikhathi ezi-3 ngosuku. Kepha lokhu kuphela lapho isisu siphilile ngokuphelele. Uma kukhona ukuphambuka emsebenzini wakhe, khona-ke irejimeli yokuphuza kufanele ilungiswe.
Uma i-acidity yesisu ikhuphukile, amanzi kufanele aphuzwe cishe amahora angama-1.5 ngaphambi kokudla. Ngama-acidity aphansi, ngokungafani nalokhu, lesi sikhathi sincishiswa saba imizuzu eyi-10-15. Uma i-acidity yesisu sisonke iyinto evamile, khona-ke isikhathi sokuphumula semizuzu engama-30 kuya kwengili siyagcinwa.
Ukuphuza uketshezi ezinsukwini ezimbili zokuqala zokwelashwa kufanele kube ngevolumu engadluli kwe-100 ml ngosuku. Ngemuva kwalokho isilinganiso soketshezi sikhuphuka kancane kancane sifike ku-250 ml. Kwentsha ehlushwa isifo sikashukela sohlobo lwesibili, umthamo ungakhushulwa ube ngu-150 ml kuphela.
Ngokuqondene nezimo ngazinye zokwanda kokusetshenziswa kwamanzi amaminerali, kuvunyelwe kuphela ngokungabikho ngokuphelele kokuphulwa. Izinga lansuku zonke akufanele lidlule ku-400 ml. Ngakho-ke "amanzi afile" amaminerali avela esitolo noma ekhemisi awalimazi umzimba.
Kepha amanzi entwasahlobo angadliwa noma ngamanani amakhulu. Futhi kungcono ukuyiphuza khona lapho emthonjeni. Ngesikhathi sokuhamba, uketshezi lungalahlekelwa ezinye zezinto eziwusizo, futhi isitsha kungenzeka sihlanzeke ngokuphelele. Ukuphuza entwasahlobo akunikeli kuphela ukumunyiswa okungcono, kepha futhi nokujwayelekile kwesizinda semizwa sikashukela.
Zonke izincomo ezifakwe kuhlu eziphathelene nemithamo kufanele futhi zivunyelwe kudokotela ngaphambili. Iziguli ezihlushwa izilonda esiswini noma ukuhlinzwa kanzima kufanele zinikezwe ukunakwa okukhethekile kulokhu. Lapha, umbuzo wemithamo kufanele usuhlukaniswe.
Amanzi we-hydrogen e-healing azosebenza kangcono uma unaka amazinga okushisa awo ngenkathi uyisebenzisa.
Ochwepheshe bathi kungakuhlelela kahle ukusetshenziswa kwekofi, itiye, zonke izinhlobo zamadriphuthi ngisho namajusi. Kepha lokhu kuhlinzekwa ukuthi ukwelashwa kwenziwa kahle. Izincomo zinjengokulandelayo:
Amanzi adonswa yisifo sikashukela usuku lonke kufanele afudumele kancane. Lokhu kungukusebenza kokwelashwa. Amanzi afudumele acwebile aqeda ukoma phakathi kokudla naphakathi kokudla. Ngokuphikisana nombono wodokotela wokuthi ukuphuza ngokudla akunampilo, ngesifo sikashukela lokhu kuyamukeleka impela uma kufikwa lapho kufudunyezwa khona ukufuthelana, amanzi amaminerali etafuleni amaminerali.
Kuhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 2, ukusetshenziswa kwamanzi ashisayo kakhulu noma, ngakolunye uhlangothi, amanzi amaminerali abandayo akwemukeleki ngokuphelele. Izinga lokushisa eliphansi lamanzi lingaholela emaphashini esiswini, futhi elishisayo ngokuqinisekile lizobangela isiguli ukuba sigaye ngokungafanele esikhathini esizayo.
Ngokuqondene namanzi entwasahlobo, kuvame ukubanda ngokwako - kwesinye isikhathi kucishe kube neqhwa. Kunconywa ukuyiphuza ngohlobo lwayo lwangempela, kodwa ukwenze ngamazipho amancane. Uma isiguli sinezinkinga ngomphimbo, ungathela amanzi esitsheni sengilazi, ulilinde lize lifudumale kancane emoyeni, bese uliphuza.
Ukushisa kuyingxenye ebaluleke kakhulu yokusetshenziswa okufanele kwamaminerali amanzi kashukela. Amanzi we-hydrogen ukwelashwa kwesifo sikashukela kufaneleka kuphela lapho enokushisa okufanele. Ngaphandle kwalokho, kungaholela emiphumeleni engathandeki.
Azuzisa ngani amanzi we-alkaline? Uyakwazi nokugeza isisu sakhe. Amanzi we-hydrogen kashukela angabekwa odokotela nangesimo se-enemas. Kepha lokhu akusebenzi kuzo zonke iziguli, kepha ezimweni eziningi kuphela yilabo abanezinkinga ezithile. Enziwa kanjani ama-enemas ngalamanzi futhi lokhu kunikezwa kunikeza ini?
Uma isiguli sinezela, ngaphezu kwesifo sikashukela, i-ketoacidosis noma sisho izinkinga emgodini wesisu, ukuhanjiswa kwesisu ngendlela ye-enemas kunqunywa ngezikhathi ezithile. Inani lamanzi afakelwe i-rectum ngqo lihambisana nesisindo sesiguli nokudla akudliwayo. Futhi, i-enemas enamanzi amaminerali isetshenziswa kabanzi ubuthi nokuphuza umzimba.
I-duodenal tubage yindlela eyingqayizivele yokuqhuma kwamathumbu esiswini, lapho isiguli sinikezwa isisu esingenalutho ukuze siphuze ngokushesha ingilazi yamanzi amaminerali, lapho i-sulfate magnesia igxunyekwe emgudwini odingekayo.
Ngokushesha emva kwalokhu, cishe i-150 ml yamanzi amaminerali angenacala adakiwe. Ngemuva kokuphuza okunjalo, isiguli sivame ukubekwa ohlangothini olulodwa, bese kufakwa ipedi yokufudumeza efudumele endaweni yesibindi. Ngakho-ke udinga ukuqamba amanga cishe amahora amabili. Ukulula okunjalo, kepha ngasikhathi sinye ukwelashwa okusebenzayo kusiza ukuqeda i-mucus, i-leukocytes nama-pathogen emzimbeni kanye ne-bile, okuholela ekunciphiseni ukuvuvukala.
Ngabe kusebenza kangakanani ukwelashwa kwesifo sikashukela ngamanzi amaminerali uma kusetshenziswa ngaphandle? Kuthola ukuthandwa okuthuthukayo ngokusebenzisa amabhati amaminerali, okungezwa okuhle ekusebenziseni kwamanzi amaminerali ngaphakathi. Masihlale ezintweni ezisemqoka zokugeza okunjalo:
Amabha amaminerali ayindlela enhle yokufaka ngaphakathi uma kunokuphazamiseka kwesistimu yokugaya ukudla. Ukugeza okuhleliwe kunomthelela ekujwayelweni kokukhululwa kwamanyikwe, ngenxa yalokho, izinga likashukela kancane kancane libuyele kokujwayelekile.
Ngezinhlobo ezineshukela ezinobunzima, odokotela bakweluleka ukuthi ungathathi okugeza okushisayo, kepha okufudumele, okushisa okukho kungaphezu kwama-38 ° C. Lokhu kuzokwanela ukuguqulela umsebenzi wamanyikwe.
Uma kukhulunywa ngezinhlobo eziyinkimbinkimbi zesifo sikashukela, izinga lokushisa lokugeza ngamaminerali kufanele liphansi ngisho nangaphezulu - cishe kuphela ngu-33 ° C. Ngokuqondene nenani lamanzi kuleli cala, lolu daba kufanele luxoxwe nodokotela onguchwepheshe.
Amanzi we-hydrogen, radon ne-hydrogen sulfide alungele ukugezwa. Isikhathi senqubo eyodwa sicishe sibe yimizuzu eyi-15, futhi inani lamaseshini okufanele ligcwaliswe ngu-10 ngasikhathi sinye, kufanele ugeze amahlandla amane kuphela ngeviki, kepha hhayi kaningi.
Ukugeza kufanele kuthathwe kuphela phakathi kokudla. Awukwazi ukwenza lokhu ngokushesha ngaphambi noma ngemuva kokudla, ngoba ngeke kunikeze noma iyiphi inzuzo. Akunconywa futhi ukuthi ulale egumbini lokugezela usesimweni esinenjabulo ngokweqile noma, ngakolunye uhlangothi, usesimweni sokukhathala. Ukuphila kahle ngenkathi ugeza kufanele kube yinto evamile.
Odokotela bayeluleka ukuthi baphumule ngokushesha ngemuva kokugeza. Kungcono ukusula ngokucophelela futhi ulale ngaphansi kwesembozo isigamu sehora bese uzama ukulala. Ngesikhathi sokulala, njengoba wazi, umzimba uvuselelwa. Ngakho-ke, izinzuzo zokugeza ngamaminerali kuleli cala zizoba zikhulu kakhulu.
Uma ubheka konke okufihliwe okuchazwe ukwelashwa, khona-ke amanzi e-hydrogen kashukela ngendlela yokugeza ayoletha umphumela omuhle nje.
Ukuzijwayeza kukhombisa ukuthi uma uhlanganisa amanzi okugeza nokudla okungamanzi (empeleni, wenza konke ngokulinganisela), ke ukwelapha ushukela ngamanzi kusebenza kakhulu, futhi inqubo yokunciphisa amazinga kashukela ishesha kakhulu.
Amanzi noshukela yizinto ezihlobene. Malini ukuphuza uketshezi onhlobo 2 sikashukela? Phuza okungenani amalitha amabili amanzi ngosuku. Lapho-ke umuzwa wokoma ngeke ukhathazeke kangako. Futhi-ke, ukuthi lingakanani futhi kanjani ukusebenzisa amanzi amaminerali, udokotela uzotshela. Ngempela, ngokungafani namanzi entwasahlobo aphilayo, kubhekwa njengamandla, ngakho-ke, ukusetshenziswa kwawo kuyalingana nokuthatha izidakamizwa ezinamandla. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ezimweni zesifo sikashukela sohlobo 2.
Kungenzeka ukwelapha isifo esisaqala ukusikhula ngosizo lolo lwazi lwamanzi, uma ulandela izincomo zikadokotela. Futhi noma ngabe ukwelashwa ngamanzi kunganikeli umphumela olindelekile, ukuthuthuka kwempilo yonke, ukuncipha koshukela wegazi kanye nokuqinisekiswa kwendlela yomgudu wokuphefumula kuyaqinisekiswa.
Ukukopisha izinto zesiza kungenzeka ngaphandle kwemvume yangaphambilini uma
ukusetha isixhumanisi esisebenza ngokhomba esizeni sethu.
Ukunaka! Imininingwane eshicilelwa esakhiweni yenzelwe imininingwane yolwazi kuphela futhi akusona isincomo sokusebenzisa. Qiniseka ukuthi uthintana nodokotela wakho!
Ngokulashwa okuyinkimbinkimbi kokulashwa kwamaminerali kwesifo sikashukela i-mellitus, inani uketshezi oludliwayo lincike ekuthini isifo siyinkimbinkimbi, isimo sohlelo lwepheshana esiswini kanye nenhlala kahle yesiguli.
Uma usebenzisa, imithetho elandelayo iyabonakala:
Uketshezi udliwa uhhafu wehora ngaphambi kokudla, kathathu ngosuku, ngokuya ngempilo ephelele yengxenye yesisu. Ngokuphambuka ekusebenzeni kwayo, kulungiswa ukulungiswa okwengeziwe.
Ngezinga elikhulayo le-acidity, amanzi amaminerali asetshenziswa ihora elilodwa nohhafu ngaphambi kokudla, nehora eliphansi - imizuzu eyishumi nanhlanu.
Ezinsukwini ezimbalwa zokuqala kusukela kuqala ukwelashwa, umthamo wamanzi awudluli kumagremu ayikhulu ngosuku. Kancane kancane, kwenziwa ukwanda kwemithamo, kuze kufike ku-250 ml. Uma kwenzeka sikashukela ebusheni, umthamo omkhulu ngu-150 ml.
Izinga lamanzi lamaminerali nsuku zonke akufanele lidlule ku-400 ml, noma ngabe kungekho okuphikisanayo okusobala. Kuphela kumithamo enjalo, ayikwazi ukubangela ukulimala okwengeziwe emzimbeni wesiguli.
Ukupholisa amanzi amaminerali kuzoba nomthelela omkhulu uma usebenzisa izinga lokushisa elithile lapho ulisebenzisa. Izazi ze-gastroenterologists zithi ziyakwazi ukufaka esikhundleni sekhofi ejwayelekile, itiye, amajusi kanye ne-cocktails ehlukahlukene. Lesi sitatimende siyiqiniso ngokusetshenziswa okufanele komuthi wemvelo.
Gada izinga lokushisa koketshezi olusetshenziselwa ukuphuza - kufanele lube njalo emazingeni okushisa asekamelweni. Amanzi afudumele ahlanzekile ayakwazi ukuqeda ukoma ngezikhathi zokudla naphakathi. Ezigulini ezinesifo sikashukela, umthetho wokuthi “ukuphuza ngokudla uyingozi” awuhlanganisiwe - ngalesi sifo, ukusetshenziswa kwamaminerali ngesikhathi sokudla kuvunyelwe.
Kwenqatshelwe ukweqa ngokweqile noma ukupholisa amanzi amaminerali ngokungadingekile - izinga eliphansi lokushisa lingadala izikhala zemisipha yesisu, kanti eliphakeme lizophazamisa ukugaya okungokwemvelo.
Amabhodlela amanzi akufanele agcinwe esiqandisini noma egumbini elingaphansi. Ukushisa okwengeziwe ngaphambi kokusebenzisa kungathinta ikhwalithi yoketshezi lokuphulukisa.
Amabhati wamaminerali amanzi
Ukusebenza ngempumelelo kokwelashwa kwesifo sikashukela ngokugeza kuyangabaza kakhulu kwiziguli ezinesifo sikashukela.
Uma kuhlanganiswa nokudla koketshezi ngaphakathi, khona-ke umphumela omuhle owakhiwa kabili uyakhiwa.
Izici eziyinhloko zomphumela wokwelapha uvame:
Ngokwephulwa okukhulu kwepheshana lesisu, ukugeza ngamanzi amaminerali kuyithemba elisebenzayo. Ukusetshenziswa njalo kwale ndlela kuzokwenza ukuthi ukusebenza kwama-pancreas (okuvikelwe yiwo) kube ngomphumela, umphumela wokugcina ozoba ukuqina kwamazinga kashukela ohlelweni lokujikeleza.
Izinhlobo ezingekho lula zesifo sikashukela zivumela ukusetshenziswa kwezindawo zokugeza ezinamazinga okushisa ajwayelekile okuzungeza amadigri. Lokhu kwanele ukuzinzisa amanyikwe.
Ngokuhlukahluka okuyinkimbinkimbi kokuthuthukiswa kwalesi sifo, ochwepheshe batusa ukwehlisa izinga lokushisa koketshezi libe ngama-33 degrees.
Inani elifunekayo lamanzi egumbini lokugezela uqobo lixoxwa nodokotela ohambela yedwa. Isikhathi sokusebenzisa ngobuqili singemizuzu eyi-15, inani eliphelele lamaseshini alidluli amayunithi ayi-10. Ukwelashwa kwenziwa cishe amahlandla amane ngesonto, isikhathi esisele sinikezwa ukuphumula inqubo.
Kubhekelwa kakhulu inhlala-kahle yesiguli - akuvunyelwe ukulala emanzini ngesimo esijabulisayo noma sokudangala, umphumela odingekayo ngeke uzuzwe.
Inqubo yenziwa phakathi kokudla. Kwenqatshelwe ukuya kubhavu ngaphambi noma ngokushesha nje emva kokudla.
Ngemuva komphumela wokwelapha, isiguli sidinga ukuphumula - kufanele silale futhi siphumule, uma kungenzeka, sizame ukulala. Ngezikhathi zokulala, noma zesikhashana, umzimba ufaka umsebenzi wokubuyisa - izinzuzo zomphumela wokwelapha uzokwanda kaningana.
Ukusetshenziswa okungokoqobo kwenhlanganisela yokugeza nokulawulwa ngomlomo kwamanzi amaminerali kufakazele ngokukholisayo ukubaluleka kwekhambi elinjalo lokwelapha. Ukwelashwa kwesifo sikashukela i-mellitus, ukwehla kweglucose yegazi kushesha ukwedlula lapho kusetshenziswa i-manipulation ngayinye.
Ukungakhululeki okuhlala njalo esifundeni se-epigastric kuthinta kabi isiguli, kuvame ukudala ukwanda kwesifo. Ukusetshenziswa kokwelashwa okuyinkimbinkimbi kuzosiza ukubuyisela isimo sengqondo sesiguli, okuyindlela eqondile yokuqinisa umzimba wonke.
Kungenzeka yini ukuphuza amanzi amaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2
Amanzi amaminerali wesifo sikashukela sohlobo 2 ayesetshenziswa njengezengezo ekwelashweni kwawo.
Amanzi anjalo adakiwe kanye nokusetshenziswa kwemithi yezokwelapha yasendulo, ngenxa yalokho, ukuncipha kwesifo sikashukela, njengoba umzimba wesiguli uthulisa amanzi nosawoti.
Ngenxa yalokhu, umsebenzi wezitho zangaphakathi, ngokwesibonelo, ama-pancreas, uyabuyiselwa, obaluleke kakhulu kwabanesifo sikashukela.
Amanzi amaminerali kushukela wohlobo lwesibili hhayi nje kuphela athuthukisa kakhulu i-metabolism yama-carbohydrate, kodwa futhi ikuvumela ukuthi usebenze ama-receptors azwela i-insulin ebusweni be-membrane yeseli, uthuthukise imiphumela yama-enzyme abhekene nokukhiqizwa kanye nokufakwa kwe-insulin ngamaseli ahlukene we-insulin.
Ngaphezu kwalokho, usizo lwamanzi anjalo futhi kungenxa yokuthi iqukethe cishe zonke izinto eziwusizo zamaminerali ezivumela imiphumela emihle emzimbeni womuntu.
Ukuphuza amanzi amaminerali kuvame ukuqukethe ama-sulfates nama-bicarbonates, okunganciphisa izinga le-acetone ku-plasma yegazi. Ngaphezu kwalokho, lezi zinto zikuvumela ukuba ususe izinto ezingaphansi kwegazi egazini futhi wandise izinqolobane ze-alkaline kuwo. Uma uphuza inani elikhulu lalolu ketshezi, ungasiza umzimba ukuzikhulula emafutheni ngokweqile, kumahhala wamafutha acid futhi wehlise inani le-cholesterol ephelele.
Amanzi amaminerali ngokumelene nesifo sikashukela athinta inani lama-phospholipids aqondene nokuhambisa amafutha. Ngakho-ke ngokuvame ukwelashwa isikhathi eside, inani labo liyanda. Ukusetshenziswa njalo kwamanzi wamaminerali kuleli cala kukuvumela ukuthi wenze ngokwejwayelekile umsebenzi wecookie futhi uguqule nokulinganisela kongausawoti wesiguli. Ngenxa yalokho, uyeka ukuhlushwa ukoma okungapheli, okuyisimo sohlobo lweshukela kababili.
Kuyafuneka futhi ukuphawula iqiniso lokuthi i-sulfate ne-carbonic acid etholakala ekwakhiweni kweziphuzo ezinjengalezi ze-carbonated futhi ezingekho i-carbonated kungaqala inqubo yokuvuselela kanye nezinqubo ze-oxidative emzimbeni wesiguli. Ngenxa yalokho, ukukhiqizwa kwakhe kwe-insulin kukhuphuka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, amanzi amaminerali amaningi sikashukela i-mellitus yohlobo lwesibili anikezwa isiguli esithuthukisiwe nge-hydrogen sulfide.
Kunoma ikuphi, ungaphuza kuphela amanzi udokotela azowabekela isiguli. Akumane kunengqondo ukuthi “i-refuel” ngesiphuzo esinjenge-soda, njengoba amanzi ajwayelekile kwabanesifo sikashukela kunganciphisi ukuhlaselwa ukoma, kepha kungadala umthwalo ezinso. Lokhu, kungabathinta kabi.
Ngaphezu kwalokho, ungakhohlwa ngemithi eminye yokwelashwa main eyenziwa ngayo. Yiwo enza umnikelo omkhulu ekulweni nalesi sifo.
Kulokhu, lapho uqala ukwelashwa ngamanzi amaminerali, kuyadingeka ukubheka ngokucophelela nangokucophelela zonke izincomo zikadokotela oholayo, kubandakanya nombuzo: angakanani amanzi amaminerali okufanele achithwe ekwelapheni isifo sikashukela?
IHydrotherapy yesifo sikashukela
Kwabanesifo sikashukela, kuye kwenziwa ukwelashwa okukhethekile kwamaminerali, okubandakanya izidlo ezintathu ngosuku, kanye ngosuku, ihora elilodwa ngaphambi kokudla. Uma i-acidity yehliswa, amanzi amaminerali kufanele adliwe imizuzu eyishumi nanhlanu ngaphambi kokudla, ngoba ikuvumela ukuthi ukhuphule ukugcotshwa kwejusi yesisu. Lapho i-acid yejusi yesisu sesiguli ingaphakathi kwebanga elijwayelekile, phuza amanzi amaminerali cishe imizuzu engamashumi amane ngaphambi kokudla.
Odokotela balule ukuthi ukuqala i-hydrotherapy ngemithamo engekho ngaphezu kwesigidi. Njengoba ukwelashwa kukhula, zingakhuphuka zibe yingilazi eyodwa ngosuku. Uma uthathwa ngobuningi futhi ungazilandeli izincomo ezinjalo, amaminerali wamanzi uzolimaza kuphela isiguli esinesifo sikashukela.
Ngaphezu kwalokho, kwezinye izimo, ungadlula idosi elinconyelwayo ngokuwukhulisa ube ngamamililitha angamakhulu amane, ulihlukanise ekudleni okubili kanye nokuphumula kwemizuzu engamashumi amathathu, kushintshana nokudla. Ngendlela, uma usebenzisa amanzi amaminerali esimweni esishisayo, ulahlekelwa yizinto ezinjenge-hydrocarbon ne-hydrogen sulfide, ezithuthukisa izinqubo ze-metabolic futhi zibe nezindawo eziwusizo.
Kuhlobo 2 sikashukela mellitus, iziguli ziphathwa ngamanzi amaminerali lemikhiqizo elandelayo:
Kokubili uhlobo lwamanzi anjalo nokuthi lidinga ukuphuzwa malini ngosuku kufanele kunqunywe kudokotela ohambelayo. Unikeza izincomo ezinje ngokuya ngeminyaka yesiguli, uhlobo lwesifo sayo kanye nezinkinga ezikhona. Ngasikhathi sinye, kubalulekile ukuqaphela ukuthi amanzi amaminerali anikeza imiphumela engcono kakhulu uma uzophuza amanzi ngokuqondile emthonjeni. Ukuze wenze lokhu, kufanele uvakashele ngezikhathi ezithile ezikhethekile zezokwelapha. Ekhaya, ungalashwa ngamanzi asemabhodleleni.
Kuyaqapheleka ukuthi uhlobo 2 lwesifo sikashukela ngokwelashwa kwamaminerali kungaphilisa nezifo zesistimu yokugaya ukudla, njengezilonda zesisu, i-cholecystitis noma i-enterocolitis. Le nto ihambisana neqiniso lokuthi amanzi amaminerali anomthelela omuhle kwizitho zokugaya kanye nohlelo lomchamo.
Umphumela uba ukwelashwa okuphelele okungasithuthukisa kakhulu isimo sesiguli esinesifo sikashukela.
Sekungamakhulu eminyaka, besebenzisa enye indlela yokwelapha i-2 mellitus yesifo sikashukela ngamanzi amaminerali. Kuqukethe ukufaka isiguli kubhavu egcwele ngamanzi amaminerali. Kulokhu, umzimba womuntu udonsa izinto ezizuzisayo esikhunjeni.
Ngenxa yalokho, ngenxa yokujwayelekile kwamanyikwe kanye nezinye izitho zomzimba womuntu, isiguli senza njengokujwayelekile ukukhiqizwa kwe-insulin. Imvamisa, amabheshu ayadingeka kwiziguli ezinenkinga yohlobo 2 nohlobo 1 sikashukela.
Imvamisa kwakusetshenziswa i-radon hydrogen sulfide efudumele nokunye okugeza igesi. Uma kwenzeka lesi sifo sishubile noma simnene, geza ngamazinga okushisa afinyelela kuma-38 degrees Celsius. Kepha uma lesi sifo sesidlulile esigabeni esilinganiselwe noma esinzima, kuyadingeka ukwehlisa izinga lokushisa kubhavu libe ngama-33 degrees. Noma yiziphi izinqubo zamanzi zinconywa hhayi ngaphezulu kwezikhathi ezine ngesonto. Ngasikhathi sinye, isikhathi seseshini kufanele sibe imizuzu eyi-15, inkambo uqobo lwayo kufanele ibe nezikhathi eziyi-10 ezinjalo.
Iziguli zigeza ngemuva kokudla ngemuva kwehora elilodwa. Uma isiguli sizizwa singasebenzi futhi sikhathele, le nqubo ayikwazi ukunconywa lapho ukugeza sekuqediwe, isiguli sizodinga ukuphumula okungenani imizuzu eyishumi futhi kungabi ngaphezu kwehora elilodwa.
Kwividiyo ekulesi sihloko, udokotela uzokhuluma ngezinzuzo zamaminerali.
Amanzi amaminerali wesifo sikashukela mellitus 2: izinzuzo nokulimala
Njengamanje, emibuthanweni yososayensi abengeziwe ekufundeni ngenkuthalo izimfanelo zokuphulukisa nezakhiwo ezizuzisayo zamanzi amaminerali ezinhlobo ezahlukahlukene.Ngokwemiphumela yocwaningo, ukusetshenziswa njalo kwamanzi emvelo, kugcwele amaminerali kanye nezinto zokulandela umkhondo, kusiza ukwenziwa ngokwezifiso umzimba we-metabolic kasawoti emzimbeni, kubuyiselwe futhi kuthuthukise umsebenzi wazo zonke izitho nezinhlelo.
Amanzi amaminerali asiza ikakhulukazi uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2, kanye nokuphikisana nesizinda sesimo sangaphambi kwesifo sikashukela nesimo sokuzijabulisa sesifo. Ngokusho kongcweti, lesi siphuzo siyenzeka futhi ngemuva kokusetshenziswa kwemithi yendabuko.
Ngaphezu kwalokho, ukusetshenziswa kwamanzi njalo kusiza ukukhulisa ukusebenza kahle kwemithi kanye nokususwa kobuthi obubangelwa ukusetshenziswa kwemithi. Kodwa-ke, kufanele kukhunjulwe ukuthi ukuphuza ngokweqile uketshezi akulona usizo futhi kungaholela emiphumeleni emibi.
Amanzi amaminerali wemvelo angumthombo wobungqabavu nempilo enhle.
Izinzuzo kanye nokulimala kwamanzi amaminerali
Umuthi wanamuhla uya ngokunaka hhayi nje kuphela ezindleleni zendabuko zokwelapha isifo sikashukela, okubandakanya ukuthatha imishanguzo, kepha futhi nosizo, ngokusekelwe ekudleni, ekusetshenzisweni kokupheka kwabantu, nasekuphuzeni iziphuzo ezahlukahlukene, kubandakanya namanzi amaminerali. Leli ketshezi lokuphulukisa, elitholakala emathunjini omhlaba, linokuhlukahluka kwamakhemikhali nezakhiwo ezimangazayo ezifaka isandla ekusebenzeni kwemisebenzi yazo zonke izinhlelo nezinhlaka.
Ukudla njalo amanzi amaminerali sikashukela kusiza ukuguquguqula amazinga kashukela.
Amanzi amaminerali kushukela likashukela kukuvumela ukuthi wenze ngokwejwayelekile izinga le-glucose ku-hemolymph futhi uvikele ukuguquguquka kwalo okubukhali. Ngaphezu kwalokho, kuyasiza ukuthola izinqubo ze-metabolic futhi kugcwalise umzimba ngezinto zomkhondo ezibalulekile.
Ngaphambi kokusebenzisa lesi siphuzo, kufanele uzijwayeze ngokucophelela ukwakheka kwawo, izinhlobo zawo, kanye nezakhiwo ezizuzisayo ezinkulu:
Kumele kugcizelelwe ukuthi ekwelashweni okusebenzayo ngokusebenzisa amanzi amaminerali, kufanele usebenzise uketshezi olutholwe ngqo emthonjeni wemvelo. Kodwa-ke, uma ungekho ithuba elinjalo, ungaphuza isiphuzo esinamabhodlela, kepha kulokhu udinga ukuthenga imikhiqizo esekhwalithi kuphela.
Kufanele futhi kwaziwe ukuthi ukusetshenziswa kwamanzi asezingeni eliphansi noma okungafanelekile kungaholela emiphumeleni engathandeki kakhulu esigulini sikashukela. Kungenxa yesizathu esibonisiwe sokuthi irejimeni yokwelashwa kufanele ithuthukiswe futhi isiphuzo esifanelekile kunazo zonke kufanele sikhethwe kuphela ngokuya ngezincomo zikadokotela ozobakhona.
Iseluleko! Amanzi amaminerali akusona isiphuzo ongasiphuza ukuqeda ukoma kwakho. Kufanele idakwe ngamahora achazwe ngokuqinile futhi ngamanani amancane kuphela. Ngasikhathi sinye, kungakuhle ukuthi usebenzise amanzi angaqhubekanga ngenqubo ye-aeration.
Izincomo zokwelashwa kwamanzi
Lapho uqala inqubo yokwelashwa, kubalulekile ukuthi ungazi kuphela ukuthi ungamuphi amanzi amaminerali ozowaphuza ushukela, kodwa nokuthi kunamzuzwana ongakanani okuzuzisa kakhulu umzimba ukusebenzisa lesi siphuzo sokupholisa.
Ukuthola imiphumela yokwelashwa ebekiwe, kuyadingeka ukugcina imithetho ethile, phakathi kwayo okukhulunywa ngayo ngokuyinhloko:
Ukwelashwa kufanele kuqala ngokusebenzisa izingxenye ezincane zamanzi. Inani elifanele loketshezi, okufanele lidakwe ngesikhathi, akufanele lidlule uhhafu wengilazi. Ngokuzayo, ungakhuphula inani uketshezi oluthathwe engilazini eyodwa kuya kwezingilazi ezimbili.
Akunconywa ukuphuza ngokushesha ngaphambi noma ngemuva kokudla. Kungcono ukuphuza uketshezi okungenani ihora ngemuva kokudla.
Ukuphuza kokuqala koketshezi lokwelapha mhlawumbe kwenziwa ngokushesha ngemuva kokuphaphama. Kufanele uphuze kusuka kwengxenye kuya kwengilazi ezimbili ngaphambi kwemizuzu engamashumi amane ngaphambi kokudla kwasekuseni.
Musa ukusebenzisa amanzi abandayo noma ashisayo, akunconywa ngokwezigaba ukuthi uphuze isiphuzo, ngaphambili unezela iqhwa kuso. Ukushisa komkhuhlane kufanele kube kahle.
Akufanele uqede ukoma kwakho ngenani elikhulu le-ketshezi, kwanele ukuthatha izingcosana ezimbalwa.
Akunconywa kakhulu ukuthi kuhlanganiswe ukuthathwa kwamanzi amaminerali kanye nokusebenzisa ezinye iziphuzo, ngokwesibonelo, amanzi angenalutho, itiye, ikhofi. Le nhlanganisela inciphisa kakhulu izakhiwo zokupholisa zamanzi okupholisa.
Kufanele futhi kukhunjulwe ukuthi ukusetshenziswa kwamanani amaningi amanzi kungadala ukwanda kwesimo sesiguli ngenxa yokungalingani ezinqubweni ze-metabolic. Inani lamanzi elivunyelwe ukudonsela amanzi phakathi nosuku akufanele lidlule amalitha amabili.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela ngamanzi amaminerali
Indlela ejwayelekile yokwelapha izifo eziningi ukuphuza amanzi amaminerali ngaphakathi. Ngasikhathi sinye, inani lokwamukelwa kanye nenani lengxenye engadakwa ngesikhathi kungahluka kakhulu ngokuya ngesifo esikhona kanye nezimpawu zomzimba zesiguli. Kuyaluleka ukuthi uqale ukwelashwa ngokusetshenziswa kwezingxenye ezincane ze-ketshezi futhi ubheke isimo sesiguli ngemuva komthamo ngamunye.
Amanzi amaminerali asiza kakhulu isifo sikashukela, uhlobo 1 nohlobo 2 sikashukela, kanye nezifo zomgudu wokugaya. Ukuthola imiphumela yokwelashwa efanelekile, kufanele uphuze amanzi okungenani kathathu phakathi nosuku, isikhathi esithile ngaphambi kokudla okuyinhloko. Kulokhu, isikhathi sesikhathi singashiyana ngandlela-thile ngokuya ngokwakhiwa kwamakhemikhali koketshezi.
Njengoba kuphawuliwe ngenhla, ukwelashwa okusebenzayo kudinga amanzi okuphuza atholakala emthonjeni. Amanzi anjalo wamaminerali wesifo sikashukela anokwakheka kwamakhemikhali okucebile kakhulu nezakhiwo eziwusizo kakhulu zokuphilisa.
Ngokuzayo, ungasebenzisa uketshezi olunamabhodlela, kepha ezigabeni zokuqala zokwelashwa kuchazwa ukuthi uphuza kuphela amanzi amaminerali angempela, ikhwalithi nemvelaphi yayo yemvelo engakhuphizi ukungabaza.
Esikhathini sikashukela, kanye nezifo zomgudu wokugaya ukudla, kunconywa ukuphuza amanzi amaminerali izinsuku ezingamashumi amathathu, emva kwalokho kudingekile ukuqeda inkambo yokwelashwa bese uyiphinda ngemuva kwezinyanga ezintathu. Lokhu kwelashwa ngamanzi amaminerali kuyindlela enhle kakhulu futhi kuvimbela umzimba ukuthi ungagxili kakhulu ngezinto ezitholakala ngobuningi ekwelapheni uketshezi bemvelo.
Iseluleko! Ukuthola imiphumela emisiwe yokwelashwa ngamanzi amaminerali, ukwelashwa okuyinkimbinkimbi kufanele kwenziwe, okubandakanya hhayi ukusetshenziswa kwe-liquid ngaphakathi kuphela, kodwa futhi nokusetshenziswa kwayo njengendlela yokusebenzisa kwangaphandle.
Lapho uphendula umbuzo wokuthi kungenzeka yini ukuphuza amanzi amaminerali onesifo sikashukela, akudingeki nje ukuthi ugcizelele ukuthi kwezinye izimo kuyadingeka, kodwa futhi futhi uqaphele ukuthi ukusetshenziswa okuhlangene kokulashwa kwamanzi kuzovumela, uma kungenzeki ngokuphelele ukuqeda lesi sifo, bese kunciphisa kakhulu ukubonakaliswa kwaso futhi sithuthukise ikhwalithi impilo iyonke.
Isibonelo, izinqubo zokuthatha okuthiwa ama-mineral baths zilusizo ngokukhethekile kwabanesifo sikashukela. Kodwa-ke, ukuvikela ukulimala okungenzeka futhi uthole imiphumela efanele, kufanele uzijwayeze ngezincomo zodokotela maqondana nokuziphatha kwalolu hlobo lwenqubo.
Lapho kukhona izifo ezenzeka kalula zesifo sikashukela, ngokwesibonelo, ama-pathologies womgudu wokugaya ukudla, ukusebenza kokuphazamiseka kohlelo lokujikeleza kwegazi, ukuvela kwezinkinga zesikhumba, kuyadingeka ukwenza ukwelashwa ngokusebenzisa amabhathi amaminerali.
Isikhathi esifanele senqubo eyodwa yokugeza akufanele sibe ngaphansi kwemizuzu eyishumi nanhlanu. Kulokhu, izikhathi kufanele zingabi ngaphansi kane ngesonto, ngaphandle kwalokho umphumela wendlela esetshenzisiwe yokwelashwa uzoba mncane.
Akunconyelwe kakhulu ukwenza inqubo ngaphambi kwemizuzu engamashumi amathathu ngaphambi noma ngemuva kokudla noma ukudla okulula.
Ukuthola imiphumela yokwelashwa emenyezelwe, kufanele kwenziwe okungenani izikhathi eziyishumi zokwelashwa kwamaminerali.
Ngemuva kwenqubo ngayinye, kufanele uphumule isigamu sehora, uphuze amanzi noma itiye le-herbal. Kuyadingeka ukukhumbula ukuthi ukugeza ngenkathi usesimweni sokukhathala ngokweqile noma, ngakolunye uhlangothi, injabulo ayikhuthaziwe.
Ukushisa kwamanzi akufanele kube phezulu ngokweqile. Ukuthola umphumela wokwelashwa oyifunayo, kufaka phakathi ukuphumula, okugeza kufanele kufudumele noma kupholile.
Lapho ukhetha amabhathi okugeza asuselwa emanzini amaminerali njenge-anti -abetes therapy, umuntu akufanele akhohlwe ngezindlela zokwelapha ezihlangene nezifanayo. Isibonelo, inhlanganisela ye-hydrogen sulfide, i-radon kanye nezindawo zokugeza zodaka kuzoba usizo kakhulu.
Iseluleko! Ngaphambi kokuqala kokugeza ngamakhambi okwelapha, kufanele uthintane nodokotela onguchwepheshe, ngoba ukusetshenziswa kwalezo zinqubo kuhlinzeka ngenani le-contraindication kanye nobungozi bemiphumela emibi.
Izinqubo Zokuhlanza Umzimba
Ezimweni ezibucayi kakhulu, ngokwesibonelo, nezinkinga zohlobo 1 nesifo sikashukela 2, futhi nangokuphikisana nesizinda sokuba khona kwezifo ezithathelwanayo zomgudu wokugaya ukudla, ukusetshenziswa kwamanzi amaminerali akumlethi isiguli impumuzo efanele. Ezimweni ezinjalo, ochwepheshe bavame ukutusa ukubizwa kwe-duodenal tubing kanye nokusetshenziswa kwama-microclysters.
Lezi zinqubo zenziwa ngokulandelayo:
I-duodenal tube noma i-gastrointestinal lavage. Njengomthetho, inqubo efanayo yenzelwa izifo zesibindi kanye ne-gall bladder futhi iqukethe okulandelayo: ukuqala, isiguli kufanele siphuze ingilazi yamaminerali esiswini esingenalutho, lapho kufanele kuhlanjululwe amagremu ayishumi nanhlanu we-magnesia powder. Ngemuva kwemizuzu embalwa, udinga ukuphuza enye ingxenye yengilazi ye-ketshezi bese ubeka ipedi yokufudumeza efudumele endaweni yesibindi. Inqubo akufanele yenziwe kungabi kanye kanye noma kabili ngesonto. Uma sisetshenziswe kahle, isilinganiso esinjalo sizosiza ukumisa izinqubo zokuvuvukala futhi sihlanzise umzimba wesiguli ngobuthi nangobuthi.
Ama-Microclysters. Ukusetshenziswa kwe-enemas ngamanzi amaminerali kwenziwa kuphela ngokumelene nesizinda sezifo zokuvuvukala sepheshana lesisu ukuqeda izilonda. Inani lezinqubo, kanye nenani loketshezi oludingekayo kwinqubo eyodwa, kunqunywa kuphela ngudokotela ngokuya ngezimpawu zecala lomtholampilo kanye nesimo somzimba sesiguli. Sebenzisa ama-microclysters ekhaya kudangele kakhulu.
Lapho uthenga amanzi amaminerali, ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe kwikhwalithi yesiphuzo. Kufanele ukhethe iziphuzo emabhodleleni engilazi agcina izakhiwo zamaminerali.
Ngakho-ke, ngaphandle kwazo zonke izinzuzo zamanzi amaminerali, kufanele kudliwe ngamanani amancane, ngaphandle kwalokho lolu ketshezi lokuphulukisa lungadala ukwanda kwesimo sikashukela. Kepha abantu abangenazo izifo, kulokhu akukho mingcele ekuthweni kwamanzi amaminerali. Ukuthola imiphumela eshiwo kakhulu yokwelashwa, kunconywa ukuhlanganisa ukusetshenziswa kwamanzi nokusetshenziswa kwezindawo zokugeza zokwelapha.
Ngenxa yokuthi akuyena wonke umuntu onesifo sikashukela ongakwazi ukuthenga isikhathi eside ezindaweni zokugcina eziseduze nemithombo yokupholisa uketshezi, abantu abaningi babuza lo mbuzo olandelayo: kungenzeka yini ukuthi uphuze amanzi amaminerali angenamabhodlela onesifo sikashukela?
Vele, le ndlela yokwelashwa nayo iyindlela enhle yokwelashwa. Kodwa-ke, kulokhu, kufanele ukhethe ngokucophelela amanzi ngaphambi kokuthenga, unaka ikhwalithi yayo. Lokhu kungenxa yokuthi njengamanje imakethe yabathengi igcwaliswa yizimpahla ezingafinyeleli imigomo yekhwalithi eyamukelekayo noma eyimbumbulu.
Ukusetshenziswa koketshezi olunjalo akugcini nje ngokuletha izinzuzo zomzimba, kodwa futhi kungadala ukulimala okukhulu. Ukuthathwa kwamanzi asezingeni eliphakeme ngempela emithonjeni yemvelo kuzosiza ukuqinisa impilo futhi kunciphise kakhulu ukubonakaliswa kwesifo sikashukela.